Raw Oxymetholone (Anadrol) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Oxymetholone (Anadrol) powder is oral steroid iyo ndeyeboka remishonga inozivikanwa sevanabolic steroid uye ndiyo chaizvo iyo zita reOxymetholone. Kushandiswa kwevanabolic steroid inoramba ichiita misoro yemitambo semashambadziro uye vatambi vanovashandisa kuti varambe vari muchikwata chepamusoro. Vazhinji vashandisi vanotora steroid iyi yekusimudzira-kukurudzira uye kusimba-simba mune tariro yokuti vachawedzera simba ravo rekusimudza zviremu zvakanyanya.
Raw Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1) Tsanangudzo
Raw oxymetholone powder ndeyomumuromo inoshandiswa anabolic steroid uye 17alpha-methylated yakagadzirwa ye dihydrotestosterone, ine basa androgenic. Kunyange zvazvo oxymetholone ine ukama hwakasimba hwekusungira iyo androgen receptor (AR), inoita kuti zviratidzo zveAr-mediated zvive zvakasimba, izvo zvinoita kuti mapuroteni synthesis uye erythropoietin zvivepo. Uyu mujeri anogona kukurudzira musimba kukura, kuita kuti hemoglobin yakagadzirwa uye tsvuku yeropa rekuumba, uye kukurudzira kuwedzerwa kwepafu.
Raw Anadrol powder inoratidzirwa mukurapa kweanemias inokonzerwa nokusakwana kwemasero matsvuku. Yakagadziriswa aplastic anemia, congenital aplastic anemia, myelofibrosis uye hypoplastic anemias nekuda kwekutungamirirwa kwemishonga inokonzera myelotoxic inowanzopindura. Oxymetholone haifaniri kutora mamwe maitiro anotsigira akadai sokuwedzerwa, kucheneswa kwesimbi, folic acid, vitamini B12 kana kupera kwe pyridoxine, antibacterial therapy uye kushandiswa kwakakodzera kwe corticosteroids.
Kemikari Name Anadrol, CI-406; NSC-26198
muchiso Name Anadrol, Anapolon
Molecular Wsere 332.48
Kunyorera Point 172-180 ° C
Biological Half-Life 8 - 9 maawa
ruvara Muchena kuchena kwehuni poda
Skukodzera <0.1 g / 100 mL pa 23 ºC
APane An anabolic steroid, iyo yakagadzirwa nemunhu wehomoni yakafanana ne testosterone uye yakashandiswa kurapa mamwe marudzi ekushaya ropa (kusakwana kwemasero matsvuku eropa), kusanganisira anemia inokonzerwa nekemotherapy.
Chii chakakosha Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1)?
Oxymetholone, inotengeswa pasi pemazita ezita Anadrol neAnapolon pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga iyo inoshandiswa kunyanya mukurapa kweanemia. Inoshandiswawo kurapa osteoporosis, HIV / AIDS kuparadza syndrome, uye kukurudzira kuwedzera kuwedzera uye kukura kwemisimba mune mamwe mamiriro ezvinhu.
Iyo Yakakura Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1) mabasa
Anadrol inogona kutarisirwa nenzira mbiri: mumuromo uye kuburikidza nekujowa. Mahwendefa eOxymetholone omumuromo anowanikwa mumabhodhoro ane 100 white akawana mapiritsi. Paunotora Anadrol mumuromo, iyo yakakodzera zuva nezuva yeOxymetholone muyero yevatambi vechidiki ndeye 1-5mg kilogram yemuviri wemuviri. Inonyanyozivikanwa Anadrol (Oxymetholone) muyero ndeye 50 mg pazuva. Kana muviri wako unogona kuzvigadzirisa, hapana chinokonzerwa nekuwedzera miviri yako yeOxymetholone zvishoma nezvishoma kusvika ku 100 mg pazuva.
Raw Oxymetholone (Anadrol) powder (434-07-1) Makomborero
(2) Inokurudzira kunyanya kuwanda kwevanhu
(3) Inowedzera simba
Tenga Oxymetholone (Anadrol) powder kubva kuBuasas.com